Ndiani Munhu Akanyanya Simba muIndasitiri Yekukurudzira Zvigadzirwa?
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Ndiani Munhu Akanyanya Simba muIndasitiri Yekukurudzira Zvigadzirwa?
Iyo Advertising Specialty Institute® (ASI), iyo huru dzidzo, midhiya uye kushambadzira sangano rinoshandira iyo $20.7 bhiriyoni yekusimudzira zvigadzirwa indasitiri, nhasi yakazivisa yegore Power 50 runyorwa rwevatungamiriri vane simba muindasitiri. Phil Koosed, muvambi weBAMKO uye mukuru wezvemazano ekambani yevabereki, Superior Group of Companies, akatumidzwa zita rekutanga pakati pevanhu vane simba zvakanyanya muindasitiri.
Mamwe emamwe mashanu epamusoro anoratidza vatungamiriri veindasitiri vane pesvedzero inosvika kure. Ivo, mukuronga: Jonathan Isaacson, CEO/sachigaro weGemline; Jo-an Lantz, CEO/mutungamiri weGeiger; Jeremy Lott, mutungamiri/Mukuru Mukuru weSanMar; naMarc Simon, CEO weHALO Branded Solutions.
Mamiriro egore rino akasarudzika anoratidza vatungamiriri vemakambani mazhinji vakabudirira kufambisa bhizinesi ravo panguva yedenda re coronavirus. Hutungamiri hwaKoosed hwaive hwakakosha kuti BAMKO ipinde muPPE, iyo yakabatsira zvakanyanya kukambani kuwedzera mari yayo yegore rekuNorth America promo 78.5% kusvika $194 miriyoni muna 2020 - kusimuka kukuru kwegore-pamusoro kwechero makambani makumi mana epamusoro ekugovera.
"Makorokoto kune vatungamiri vose, vaoni uye vashandi vekambani vanobatanidzwa paSimba rakakurumbira 50. Ndivo vakanakisisa vezvakanakisisa," akadaro Timothy M. Andrews, mutungamiri weASI uye CEO.
Indasitiri yezvigadzirwa zvepromo ine vatengesi vanogadzira, vanogadzira uye/kana vanodhinda zvigadzirwa uye vanogovera vanoshambadzira nekutengesa izvo zvigadzirwa kune vatengi. Mabhuranzi makuru pasi rose, pamwe chete neasina purofiti, zvikoro, zvipatara nemabhizinesi madiki, anowanzo kupa zvigadzirwa zvekushambadza zvine logo kushambadzira kambani yavo kana chiitiko uye kutenda vashandi nevatengi.
ASI yakafumura iyo Counselor 2021 Power 50 panguva chaiyo ASI Power Summit. Chiitiko chekutanga cheindasitiri yekusimudzira chakaratidza chirevo chaRichard Montañez, akasimuka kubva muchengeti kuFrito-Lay kuenda kumutevedzeri wemutungamiri wePepsiCo.
Yakaunzwa muna 2006, iyo Counselor Power 50 gore negore inotarisa mugovani uye vatengesi vatariri vanoita zvakakura pamusika wekusimudzira.